Fibebahana sy fandraisana andraikitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanangona Rwat il y a 17 jours
Lalan-kevitra ajoro hitadiavam-bahaolana eto anivon’ny Firenena Malagasy. Teraka noho ny fahatsapan’ny maro fa diso lalana isika nandritra ny 60 taona nahazoana ny fahaleovan-tena. Mbola voazarazara ny Malagasy mandraka ankehitriny. Betsaka ny Kristianina fa tsy miantraika eo amin’ny Firenena ny soatoavina ananany. Lasa isehosehoana fotsiny ny maha kristianina.
Ny finoana anefa no mahafindra tendrombohitra, ary « mandehana ataovy tonga mpianatro izao tontolo izao » : izany no tso-drano nomen’i Kristy. Mila hita taratra ety amin’ny fiaraha-monina sy amin’ny Firenena ny mahakristianina fa tsy mijanona any am-piangonana fotsiny.
Firenena manao ahoana no tiantsika hijoro amin’ny fahazato taonan’ny nahazoantsika fahaleovan-tena ?
Harambaton-kevitra; hamaritana vina sy lalana tokony hizoran’ny Firenena ao anatin’ny 40 taona manaraka, ka ho lasa source référentielle ho an’ny maro ny harambaton-kevitra amin’ny fanarenam-pirenena.
Ny harambaton-kevitra dia miainga amin’ny fanekena fa misy Andriamanitra ary manana planina tsara ho an’i Madagasikara izy ary ny Malagasy no nomeny ny hoenti-manana hanatanteraka izany. Miaraka amin’ny fiaingana vaovao rehefa samy niaiky fa samy tsy tanteraka teo anatrehan’ny Firenena. Mila tonga amin’ny fibebahana mitondra any amin’ny fanarenana.
Mila mahavita mitrandraka izay « caractères identitaires »n’ ny Malagasy nomen-janahary ary mampifanojo sy mampifameno izany amin’ny filazantsara kristianina.
Vina mitondra fomba fijery vaovao
Mametraka vina indray mihira (générationnelle) ho an’i Madagasikara. Afaka ampiharina ny fampandrosoana ny Firenena sy ny fanitarana ny Fanjakan’Andriamanitra. Trandrahana ny fifamenoan’ny maha Malagasy sy ny maha kristianina.
Fomba fanao vaovao
Fanarenana ny tsirairay ao anivon’ny fianakaviana, izay hisy fiantraikany tsara eo amin’ny fiarahamonina sy eo amin’ny Firenena Maro tohanan’ny maro. Afaka manao zavatra hatrany ny tsirairay hiovan’ny toe-java-misy. Mitrandraka sy manaparitaka ireo fampiharana tsara entina mampandroso ny Firenena.
Voafetra isika, Zanahary tsy voafetra ary manana fikasana tsara hoan’ny Malagasy.
Fanehoana ny Finoana amin’ny alàlan’ny asa, fampiraisana ny Malagasy, ny kristianina, fihavaozan’ny Fiangonana eto amin’ny Firenena ; fivelaran’ny intercession hoan’ny Firenena.
Vina mitondra lamina sy rafitra vaovao
Mba ahafahan’ny tsirairay mivoatra mahatratra ny fivoaran’ny daholobe (relèvement individuel vers le collectif) dia hitodihana manokana ireo « sehatra manan-danja » lehibe manaraka ireto noho ireo fifanakalozan-kevitra maro notanterahana, izay mety amintsika Malagasy, ny fianakaviana, fandraharahana, ny tanora, fanabeazana, fivavahana, ny serasera, ny kolontsaina sy zava-kanto, politika ary ny teknolojia vaovao.
Faheno foana ny hoe maro an’isa ny kristianina eto Madagasikara hatramin’izay. 60 taona izay no lasa taorian’ny fahaleovan-tena. Izao no misy antsika ankehitriny. Mahantra, mifanipaka toy ny valalan-karona, fanolanana re amin’ireo haino aman-jery, fanalana ain’olona. Tsy toetra kristianina avokoa izany, mila mibebaka isika, mila mitory amin’ny alalan’ny fanaovantsoa fa ny fanaovana asa no manova zavatra. Ao anatin’ny mangidy no misy ny mamy, izay tokony atao no atao fa tsy izay tiana atao. Zoma masina aloha izay vao Paka, fa tsy paka vao zoma masina. Ny hatsembohan’ny tavanao no hihinananao. Izany no tokony ho masaka an-tsaina. Koa mahereza dia manana fanantenana.